Kuxoshwe: MyBlogLog kanye neBlogCatalog Widgets | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 27, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kulabo kini abakade baba abafundi besikhathi eside, nizobona ukuthi ngisuse amawijethi webha eseceleni ye-MyBlogLog neBlogCatalog. Nginenkinga yokuwasusa isikhathi esithile. Ngikujabulele ukubona ubuso babantu abavakashele ibhulogi yami kaningi - kwenze abafundi babukeke njengabantu bangempela kunezibalo -Google Analytics.
Ngihlaziye ngokuphelele umthombo ngamunye nokuthi bahambisa kanjani ithrafikhi esizeni sami nokuthi izivakashi zami zisebenzisana kanjani nesayithi. Mhlawumbe into ebengingayithandi kakhulu kuwo womabili amawijethi yile:
Izithombe ezingenalutho ze-MyBlogLog. Uma uzoshicilela ifayela le- Iwijethi lokho kukhombisa izithombe-ke kuphela bonisa izithombe.
Izithombe zeBlogCatalog okuyizikhangiso zangempela zamasayithi abantu. Lokhu ukukhangisa kwamahhala futhi akuyona into engiyibhalisele.
Ezinyangeni ezine ezedlule, ngadlula ekuhlanzweni kwebha eseceleni - ngisusa ibhulogi yami Technorati, FuelMyBlog, Futhi I-BlogRush. ITechnorati ibonakala isebenza kanzima impela ukubuyisela ukunaka kwabo emuva kumabhulogi - ngithemba ukuthi bazobuya. I-BlogRush empeleni ayenzanga lutho yayicindezelwe kuze kube.
I-FuelMyBlog neBlogCatalog kusengamathuluzi amahle ngokwanele okusha ama-blogger ukuthola abafundi abasha. MyBlogLog ikhukhuleke yaya emafini ku-Yahoo! futhi kubonakala kungasasebenzi.
Ngabafundi abayizinkulungwane ezimbalwa ngosuku (ngewebhu naku- RSS), MyBlogLog ulethe kuphela izivakashi eziyi-16 kubhulogi yami:
IBlogCatalog; nokho, ingilethele izivakashi ezingama-58 ngesikhathi esifanayo.
Kwabanye, lokho kungabonakala njengemiphumela emihle. Inkinga ukuthi lokhu kungukuhweba okuyisisekelo kubhulogi lami. Ibha eseceleni yangakwesokudla yilapho abafundi bami abaningi abajwayelekile behlangana khona namazwana, izigaba, amavidiyo, njll. Akekho umfundi oyedwa ochofoze kunoma yiliphi iwijethi ikhasi lesikhwama sasekhaya… Hhayi 1.
Ngakho-ke imibuzo ebengidinga ukuyiphendula yile:
Yiziphi izinzuzo izivakashi zami ezazizithola kumawijethi? Akunasiqiniseko sokuthi kube khona inzuzo njengoba kungekho noyedwa ohlanganyele nabo.
Ngabe yini inzuzo ebengiyithola kumawijethi? Futhi ingabe lezo zinzuzo zidlule izinzuzo abafundi bami abazoba nazo ngokusebenzisa leso sikhala sezixhumanisi abazitholayo wenza uhlanganyele?
Isiphetho sami bekungukuthi inzuzo ebengiyithola ibinganele ukulahla isigaxa esikhulu sendawo eseceleni. Ngikholwa ngokweqiniso ukuthi zonke lezi zinsizakalo zizuza kakhulu kakhulu kuthrafikhi yakho kunanini ngaphambili.
Ngenxa yalokho… bayaxoshwa!
Ukuthola i-Visio… aka… Abantu bayazibuza ukuthi kungani ngiku-Mac
Mar 27, 2008 ku-7: 39 PM
Ngabe usalandelela ukuvakashelwa kwesiza sakho kusuka ku-BlogCatalog noma i-MyBlogLog? Ngithanda i-MyBlogLog yezibalo zayo kanye nokubona abantu abavakashile, kepha ngibona ukuthi uthini ngokuthatha izindlu nomhlaba kubhulogi. Ngicabanga ukuthi ngizohambisa i-MyBlogLog phansi kunyaweni ekwakhiweni kabusha kwami ​​okulandelayo, kepha ngizoqhubeka ngakho.
Futhi, uma labo bobabili bengawenzi umsebenzi wabo wokuletha abasebenzisi, yini? Ngokusobala wenza kahle, Doug, ngabe konke okubhaliselwe nethrafikhi yosesho ekulethela amahithi noma kukhona okunye okukusebenzelayo?
Mar 27, 2008 ku-7: 47 PM
Ngiyikholwa elikhulu lokuhola isivakashi ngasinye kubhulogi lami. Ngifuna ama-blogs amasha ngaso sonke isikhathi, ngibeke amazwana kuma-blog abo, bese ngiphendula (:)) kubantu ngedwa. Ngiphendula futhi ama-imeyili amaningi ngangokunokwenzeka lapho ngithintwa.
Ngaphezu kwalokho, ngicabanga ukuthi amakilasi endawo engiwenzayo kubhulogi nemicimbi engikhuluma ngayo iyasiza kakhulu. Nginenethiwekhi enkulu yabangane nabantu engisebenza nabo!
Ngithanda nokukhuthaza amabhizinisi nezinsizakalo ezingase zingabi 'ezijwayelekile' futhi zinakwe kakhulu. Ngikwenza ikakhulukazi uma beyizinkampani zezifunda. Ngithanda ukusiza abantu egcekeni lami!
I-PS: Ukugcina ibhulogi yakho yenziwe kahle kukhaphethi obomvu wethrafikhi yosesho… kepha okuqukethwe okuhle nokuthinta komuntu siqu kugcina abafundi abasha.
Mar 28, 2008 ku-9: 50 AM
Ngabeka amabhanela amancane ezansi kwebha eseceleni yeClark's Picks yezingosi eziningi zokuxhumana nabantu engizijoyinile. Ngokuqagela, ngithola ithrafikhi evela kuleyo engivame ukuyenza kaningi, ikakhulukazi iFuelmyblog.
Njengamanje ngizama i-Entrecard neSpott yomgwaqo. Ngabe unemicabango ngalezo zingosi?
Mar 28, 2008 ku-9: 01 AM
Siyabonga ngokwabelana nokuhlaziywa kwakho komthetho nathi sonke. Usitholaphi isikhathi ?!
Njenge insizakalo yokumaketha komphakathi, sihlala siphikisana ngokuthi imaphi amawijethi okufanele asetshenziselwe iklayenti ngalinye futhi angazi ukuthi ngiphakamiseni.
Engangikusola ngokunyonyoba ukuthi bonke babevele “bebhayela” futhi bengahambi ngezimoto zangempela. Bengihlose njalo ukucela izibalo ukuthi zihlole…
Qhubeka nokuthumela, ngizoqhubeka nokufunda !!
Mar 28, 2008 ku-12: 21 PM
Kuhle ukuthi wenze umsebenzi wokubona ukuthi yini eshayela ithrafikhi esizeni sakho nokuthi yini ebingeyona.
Kufanele ngenze okufanayo ngamawebhusayithi ami !!!
Mar 31, 2008 ku-9: 22 AM
Ngijabule ukubona iBlogCatalog ikulethela ithrafikhi ebalulekile. Kungenzeka kungabi izinombolo zokukhubeka noma ze-Digg kepha uzothola ukuthi amalungu ethu 'anamathele' kakhulu kunamanye amanethiwekhi amaningi.
Ngiyaxolisa ukukubona ukhiphe iwijethi yeBlogCatalog, kepha kubukeka sengathi unezizathu ezizwakalayo zokwenza njalo. Ngabe uke wabheka amanye amawijethi wethu muva nje? sinokuningi okukhombisa izici ezahlukahlukene zeblogcatalog yakho kanye / noma umsebenzi wenethiwekhi yokuxhumana nabantu. Lokhu kungakhanga kakhulu kubafundi bakho kunobuso nje obungahleliwe ngoba kukuqukethwe okuqondiwe okuningi. Thatha isibonelo iwijethi yethu yokuphakelwa kwezindaba, ehlanganisa umsebenzi wakho wokuzijabulisa: http://www.blogcatalog.com/account.widget.php?type=feed
Onke amawijethi ethu abuye alandele ukuthi amalungu e-BC afunda ini ibhulogi yakho ngaphandle kokubonisa izithombe / izikhangiso kuwijethi.
Qhubeka nomsebenzi omkhulu,
May 30, 2008 ku-1: 01 PM
Okubi iBlogCatalog ayidlulisi noma iyiphi i-PR ngoba isebenzisa nofollow.
Mar 13, 2009 ku-3: 05 AM
Sawubona Douglas, bekukuhle ukukubona ku-Twitter, ngifikile kanjalo lapha. Yiba nentshisekelo yokwazi ukuthi i-Twitter ikusebenzela kanjani. Ngiyavuma ukuthi kuzodingeka ngiphonse phezulu lawo mabha ohlangothini njalo! Yiba nentshisekelo yokuzwa okuningi ngeTechnorati. Ngibona abantu abaningi beshiya amawebhusayithi ami ngeTechnorati, kodwa bambalwa kakhulu abafika ngaleyo ndlela kumasayithi wami…
Ama-Mikes @ NewsBlog1st
Ngo-Apr 6, i-2009 ku-6: 37 AM
Ukuphela kwesizathu esenza ngibe ne-Mybloglog, i-blogcatalog, i-fuel myblog yingoba ngifuna ukubona ukuthi obani abavakashelayo. ngaleyo ndlela ngingahlola futhi amabhulogi abo. mhlawumbe njengophawu lokubuyisa futhi nami ukwazi ukuthi yini okungenzeka ibabhekise kusayithi lami.